Sedram-pitia - Takila Malagasy
Sedram-pitia (Andrianin'Arison Jemmy Ulrich)
Mpanoratra: Andrianin'Arison Jemmy Ulrich
Nitsidika : 2193
Sokajy: Tantara foronina
Rindra no anarako.16 taona aho ary Zanaka vavy tokan'ny ray aman-dreniko aho ary mipetraka eto Antananarivo izahay. Mpianatra tamina sekoly lehibe iray aho ary manana namana akaiky ahy tokoa izay antsoina hoe Santatra. Kilasy voalohany aho izao ary ny taranja scientifika no nofidiko hianarana izany hoe "ps" aho izao. Toy ny isan-taona moa rehefa fanombohan'ny taom-pianarana toy izao dia samy mbola eo an-tokotany miaraka mihaino ny kabarin'ny talen-tsekoly izay vao miditra any am-pianarana. Ka samy nihaino kabary teo aloha izahay izay vao niara-niditra. Fony tao am-pianarana ilay mbola tsy tonga iny ny mpampianatra dia nifampiresaka izaho sy Santatra.
-tafiaraka ato amin'ny Ps ato ihany isika ty, hoy aho nanomboka ny resaka
-tafiaraka ndray zany tsika e ato ndray no tohizana ny fanao fahiny
- marina tokoa izany e hoy aho namaly azy.
Noho ny tonga ilay mpampianatra izay ramose somary mbola tanoranora izay ihany dia samy naka izay toerana tiany nalaina aloha fa tsy mbola nisy toerana raikitra ka izaho sy i Santatra somary naka sisin-tsisiny teo am-pivoanivoany teo. Ka nanomboka ny teniny ilay mpampianatra.
- miarahaba antsika rehetra mpianatra ato amin'ny kilasy ps. Ramose Dera no anarako mpampianatra physique chimie aho ary tompon'andraikitra voalohany eto amin'ity kilasy ity . Ka tiako ny mampatsiahy anareo fa ato amin'ny ps ianareo zao. Tsy safidinay ny handefa anareo aty fa safidinareo sy ny Ray aman-dreninareo ka mila miomana ny saina fa somary mafimafy kely ny fampianarana ara-tsiansa izay hokatrohinareo amin'ity taona ity ka mila anareo mifantoka tsara fa tsy be resaka na mivanivany eto fotsiny.
Tamin'io fotoana io aho dia tapa-kevitra tanteraka aho fa tena hifantoka tokoa amin'ny fianarana izay ataoko satria efa tsapako sahady ny hamafin'io resaka siansa io. Tsy niandry ela i ramose Dera fa tonga dia natombony avy hatrany ny fampianarana ka nomeny ny programma sy izay rehetra tokony ho fantatra mandritra ny taona eo amin'ny taranja ka nifantoka tsara izahay rehetra teo amin'ny fandraisana izany. Ary toy izany ihany koa ny an'ny mpampianatra sasany izay manaraka teo.
Rehefa tonga ny atoandro dia tsy adinoko mihintsy ilay toerana fisakafoananay hatramin'izay. Ka niara-nisakafo teo izaho sy i Santatra ary nisy tovolahy roa lahy niaraka nisakafo taminay teo ka samy nisakafo aloha izahay teo. Noho ny vita ny anay dia iny nandeha nivoaka iny izahay dia nanaraka anay ry zareo ka nanomboka nampiresaka teo.
-salut, hoy ry zareo sady nandray tanana anay roa vavy ka namaly torak'izany koa izahay.
- izaho no Lova ary izy no Hasina fa ianareo no kay no izy azafady.
- izaho no Santatra ary izy kosa no Rindra.
- ay faly mahafantatra ianareo moa izany ilay mpianatra avy aiza azafady indrindra
- le sekoly iry ambony iry hoy i Santatra namaly azy ireo izaho kosa anefa nandritra izany dia nihaino ny resak'izy ireo teo sady niasa saina teo hoe fa otrany variana nijery ahy foana i Hasina. Nitohy ihany ny resak'i Lova sy i Santatra teo ka niafara tamin'ny fangatahana ny anaranay tany amin'ny facebook izany tsy nisalasala avy hatrany i Santatra nanome ny azy satria toa mifandray tsara izy ireo ka mba nomeko koa ny ahy. Ka lasa ry zareo avy eo fa izahay sy i Santatra kosa nanomboka niresaka indray.
-tsy hitan-dry ve oe otrany tovolahy somary ty mifandraindray amin'ny olona ireny sady mahalala fomba ery fa tsy mitovy amin'ireny tovolahy sasany tsy mahalala afa-tsy ny zavatra hafahafa ihany, hoy i Santatra nanomboka ny resaka.
- hitako mihintsy akia a, hoy aho namaly azy, kanefa otran'ny hafahafa amiko ny fihetsiky Hasina fa tsy mitsahatra ny mijery ahy foana izy.
- zany ve akia mba mety efa aminle... hain-dry ihany no tiako lazaina e
- dia hoe tia ve, tsy atakaloko an'i Fidy iny
- zany aaaa
Noho ny hariva ny andro dia mba niconnect kely tamin'ny facebook aho ka hitako nandefa fanasana ahy ho namany izy roa lahy ka teo no nahitako fa hay mbola tsy manan'olon-tiana i Hasina tamin'io ka mety marina ihany ilay tenin'i Santatra tamiko hoe mety tia ahy izy nefa tsy azoko atao ahoana fa izaho koa efa manan'olon-tiana.
Tsy hitako izay lazaina na koa hambara manoloana an'io tovolahy tia ahy an-tsokosoko io fa tsy te hampitomany azy aho noho izy tsotra moa koa tsy te hanary an'ny Fidy ilay olon-tiako ankehitriny aho ka very hevitra tanteraka aho.
Ny ampitso, notantaraiko an'i Santatra avokoa izany eritreritro sy adin-tsaiko tamin'io alina io ka niteny Tamiko izy ny mba tsy hampafantarana an'i Hasina sy i Lova. Lasa mpiresaka Amiko i Hasina ka lasa mpifandray matetika izahay. Ty fantatro koa izay nahazo ahy fa lasa nantsoiko hoe "dada" izy. Mety noho izy tena nahasolo ny raiko mihintsy. Nandroso teny ihany ny fotoana ka indray andro i Santatra niteny Tamiko hoe tia ahy hono i Hasina. Taitra tampoka aho nahare izany teny izany ary saika tsy nino hoe niteny an'izany an'i Santatra i Lova. Lasalasa teo ny saiko satria ny olon-tiako tsy tiako hivadihana moa koa ny foko toa tia azy tampotampoka teo. Tsy hitako intsony izay holazaina teo fa nolazaiko fotsiny i Santatra hoe tsy tokony holazaina Aminy ihany ve hoe efa manan'olon-tiana aho dia amin'izay tsy mitohy intsony ity resaka ity. Tsy haiko fa miankina amin-dry ihany io hoy izy namaly ahy.
Noho ny hariva ilay connecter iny aho dia nandefa hafatra Tamiko i Nantenaina hoe tia ana hono i Hasina. Ka novaliako izy hoe " lazao azy fa efa manan'olon-tiana hoe za". Afaka minitra vitsy taty aoriana dia mbola nandefa hafatra taty Amiko indray izy hoe " mandainga hono izaho". Fantatro ny tiany hambara teo satria vao haingana kely teo aho no nilaza fa tsy manan'olon-tiana vao roa andro lasa angamba izay kanefa aho ankehitriny ilay nilaza hoe manan'olon-tiana ka mety efa nolazain'i Hasina an'i Nantenaina izany kanefa moa na dia izany ary lazaiko ihany izy hoe "tsy mandainga izany aho" ka namaly ahy izy hoe "enao ary hoy ianao oe mbola celibataire". Ka namaly azy aho hoe efa misy any ho any. Dia tapitra teo ny resaka.
Ny ampitson'io fotoana io indrindra dia tsy mba niara-nosakafo Taminay teo intsony izy roa lahy fa toa nifindra tany amin'ny toeran-kafa ary tsy mba hitako niresaka na nifandray tamiko mihintsy i Hasina toy ny fanaony taloha. Lasalasa ihany ny saiko hoe tezitra Tamiko ve sa nalahelo ahy i Hasina manao an'io fihetsika. Toa nahatsiaro ho diso ihany ny tenako teo anatrehan'ilay fomba namaliako an-dry zareo tamin'iny, toa tsy nampoiziko ho toy izao no hiafaran'ity resaka ity.
Afaka herinandro taty aoriana kely, alarobia hariva tamin'io ora tsy fianaran'ny mpianatra ka tamin'io fotoana io indrindra no nisy hafatra tonga taty amiko avy any amin'i Hasina tao amin'ny facebook. Tsy sahiko nosokafana teo no eo ilay izy satria natahorako ho mety tezitra amiko i Hasina kanefa voasokatro ihany ilay izy ka toy izao ny resakay teo
- za koa ca va...
- aty koa tena tsy misy
Fa misy resaka tiako horesahina Aminao
- inona zany ?
Nandefa sarim-boninkazo taty Amiko i Hasina Tamin'io ka hitako fa toa ireny tsy mety very fanantenana iren mihintsy i Hasina raha ilay raozy mena nalefany taty amiko.
Nanatsafa azy ny amin'ilay resakay sy Nantenaina tamin'iny aho taorinan'io sary nalefany io
- elah moa tiana
- angambany, hoy izy namaly ahy dimy minitra taty aoriana
- ay, hoy aho namaly azy.
- nefa ianao hoy ianao efa manan'olon-tiana; hoy i Hasina avy eo.
Taitra ihany aho raha toa ka nahita an'io hafatra io kanefa moa tsy afaka ny handa intsony aho fa lazaiko azy ny marina
- ie , hoy aho namaly azy
Folo minitra taty aoriana, vao nisy hafatra tonga indray taty amiko avy Aminy. Ka toy izao no voasoratra ao "ay tsy maninona izany fa aleo izaho no hiharitra rehefa izay no mety fa iangaviko Aminao fotsiny hoe aza ravaina ilay finanamantsika hatrizay dia tsy maninona raha hampakivy ahy aza io fa izay no izy".
Tsy mbola nahita tovolahy nanoratra toa an'io aho hatramin'izay nahitako tovolahy sy nahafantarako ny toetran'ireny, fa ity iray ity tena miavaka tena miavaka amin'ny maro,tsotra ary tsy mba mora tezitra sa sosotra akory fa nitondra tambitamby sy hafaliana eo Amiko mandrakariva. Tsy atakaloko an'i Fidy anefa izy noho i Fidy efa nosafidiako talohany.
Tsotra ihany moa ny valin-teny namaliako azy tamin'io ka nanaiky ny fangatahany aho. Ny ampitso notantaraiko an'i Santatra daholo ireo resaka rehetra noresahanay ireo ary nolazaiko azy ny hevitro mikasika ny fihetsiky Hasina hoe mbola tena tia ahy izy na dia efa nampafantarina azy aza hoe efa manana olon-tiana aho. Na dia teo aza ireny i Fidy koa tsy mba nampafantarinay ny mikasika an'i Hasina sy ny fitiavany ahy fa toa lasa tsiambaratelonay roa vavy fotsiny ilay izy. Ary manana compte 2 moa aho ka tany amin'ilay compteko faharoa no tena niresaka tamin'ny olon-tiako aho satria io no tsy fantatry Hasina.
Noho ny tonga ny fialan-tsasatra dia toy ireny niverina tamin'ny laoniny ireny ny fiainana satria toa tsy tsaroan'i Hasina akory ilay fitiavany ahy fa lasa niverina nifampiresaka izahay, toa tsy tsaroany akory angamba hoe efa manan'olon-tiana aho ka lasa indray ilay vazivazinay fahiny ambaram-pahatongan'ny andro iray izay tsy nahafahako niconnecte tamin'io compte io intsony fa nisy nibloquer ny compteko ka tsy mety voasokatro intsony mihintsy ary tsy maintsy ilay compteko faharoany no nampiasaiko ary nandefasako fanasana tamin'io i Hasina ka nanaiky. Gaga ihany anefa izy noho ny nahafantatra fa hoe bloquer ny compteko 1 ary manana compte faharoany koa aho. Ka velom-panontaniana tamin'io compteko faharoany io izy ka toy izao indray ilay resakay teo.
- f'angaha ianao manana compte faharoa indray (satria aho efa nilaza Taminy hoe iny ihany ny compteko fa tsy manana hafa aho)
- ie efa compte nipetraka tato ito fa tsy nampiasaiko mihintsy
- ary naninona ilay comptenao taloha?
- f'angaha moa tsy hoe nipiratenla, ela ihany ange no nilaza an'izany e
- tsy mbola afaka nipirate compte aho raha tsy misy ordinateur taty
- ka tanteraka zao ny sitraponla
- tsy sitrapoko mihintsy zao satria na ny resaka piratage izany aza mbola hilavana ordinateur kanefa za mbola tsy manana.
Nahatonga ahy nanao an'io fihetsika io satria indray andro izay nanadala ahy izy hoe ao hoe mba hopirateko ny comptendry satria manko izy somary tia informatique izay ihany araka ny filazany ka teo no nahatonga ahy nanahy mafy hoe nipirater ny compteko izy.
Rehefa nandeha teo ihany ny andro, dia nisy nidentifier tany anaty publication aho, tsy iza io fa i Fidy ilay olon-tiako. Tsy niandry ela i Hasina fa tonga dia niresaka Tamiko hoe izaho hono kay efa ela no en couple tamin'io tovolahy io. Tsy haiko izay nahazo ah fa mbola nanda azy aho hoe vao haingana aho no en couple Taminy fa tsy ela be izany. Tsy nitohy ny resaka teo fa nijanona toy ny tsy nisy. Tsy haiko hoe naninona fa tsy nampoiziko ho hafahafa tamiko indray ilay fihetsiny taorinan'ireny resaka nifanaovanay ireny kanefa moa tsy nanao toy ny fihetsiny taloha ilay vao nahafantatra hoe nanan'olon-tiana aho dia ilay tsy nety niresaka tamiko iny. Tsy fantatro hoe inona no tiany hambara amin'ny fihetsiny ka tena nahalasa saina ahy mihintsy. Nataoko muhintsy aloha izay tsy nieritreretana an'i Hasina nandritran'iny fialan-tsasatra iny fa naleoko tena niala sasatra tokoa tsy te hieritreritra ny hiconnecte aho fa raha tsy izany dia tapitra hitako daholo ireo hafatra mipetraka ao ka metyvhanahorana ahy ihany.
Noho ny tamin'ny fidirana manaraka dia nihezaka ny nifantoka tamin'ny fianarana ihany aho satria efa kilasy famaranana ary serie D no nosafidiko satria te hanao moitsabo aho noho ny fitiavako an'ity resaka manavotra olona ity. Nandeha teny ny andro nandalo teny ny volana kanefa moa mbola hitako eo foana i Hasina. Izahay sy Fidy kosa anefa dia tena lasa mpifankatia sy efa fantatry ny maro mihintsy hoe efa miaraka amin'i Fidy aho ary efa heritaona mahery izay ary ny fifandraisako tamin'i Hasina kosa toa niha-nihena andro aman'alina ka toa miha-tsy tsaroako aza izy indraindray fa dia tena niova tanteraka ny fiainako. Afa-panadinam-panjakana aho, ary afaka toy izany ihany koa i Hasina sy Lova ary i Fidy ilay olon-tiako hatramin'izao ka nanomboka teo dia nisaraka ny dia ka tsy hitako intsony i Hasina avy eo fa i Lova namany nianatra teny ankatso niaraka Tamiko sy i Fidy, ka toy izay no nahafantarako an'i Hasina ilay naniry ahy ho azy sy nampitondra tsiky kely ho ahy nandritran'ny fiarahanay nisakafo. Iny angamba no farany nahitako an'i Hasina fa tsy fantatro intsony ny fiainany taty aoriana. Tsy fantatro ilay toerana nianarany, tsy fantatro izay hataony any izao kanefa moa toa mpandalo ihany izy teo Amiko fa ny tena anjarako dia i Fidy ihany.